Iziphesheli ze-IRS Ngabahlaseli Bentela Be-Crypto Ngokubuza Imibuzo Elula Yo / Cha | ICoinGenius Ibamba Umcimbi we-Virtual Crypto
I-IRS isebenza nababaleki bentela ye-crypto ngokumane ubabuze imibuzo engaphendulwa ngoyebo noma cha njengoba sesizothola ku izindaba zakamuva ze-cryptocurrency.
Ifomu lika-2020 lentela yentela ka-1040 yenzelwe ukuqinisekisa ukuthi bonke abakhokhi bentela kufanele baphendule umbuzo ohlobene ne-crypto. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi i-IRS isebenza nababaleki bentela ye-crypto ngokubabuza imibuzo elula yebo noma cha. Kusukela kulo nyaka, i-US Internal Revenue Service ikhulisa okubalulekile enteleni ye-cryptocurrency. Ifomu lentela likahulumeni elingu-1040 lizofaka umbuzo ophoqelelwe ongu-Yebo / Cha ohlobene nokusetshenziswa kwabakhokhi bentela ngezimali ezibonakalayo futhi le mibuzo izoba yingxenye yefomu kusukela manje kuqhubeke. Kodwa-ke, ibimiselwe ukunika amandla abanye abantu ukuthi bagweme ukuyigcwalisa.
Ngokwemibiko, imibuzo emisha yenzelwe ukubamba ababaleki bentela ye-crypto futhi isize i-IRS iwine amacala asenkantolo. I- Umbiko Wengeniso Yangaphakathi 2014-16 kubhekwa njengesiqondiso esiyinhloko sentela yezimali ezibonakalayo futhi i-IRS ithe ichaza izehlakalo ezikhokhiswa intela:
"Ngokuvamile, ukuthengiswa noma ukushintshaniswa kwemali ebonakalayo eguquguqukayo, noma ukusetshenziswa kwemali ebonakalayo eguquguqukayo ukukhokhela izimpahla noma izinsizakalo kuthengiselwano lomhlaba wangempela, kunemiphumela yentela engaholela enkokhelweni yentela."
Leli qhinga lisebenza ngempumelelo esikhathini esedlule lapho i-ejensi ingeza umbuzo maqondana nama-akhawunti asebhange angaphesheya kwezilwandle okwaholela ekutholeni intela ebiza u- $ 12 billion. Inhlangano engenayo yangaphakathi eRussia nase-UK iya ngokuya isebenza ekuphishekeleni labo ababalekela intela ye-crypto futhi neFinancial Action Task Force nayo ikhulisa ukuphoqelelwa komthetho wezokuvakasha ozolwa nokukhwabanisa kwemali. Uma lokhu kuphumelela, izinsizakalo zemali emhlabeni wonke zizokwazi ukuqoqa intela ku-crypto.
Njengoba kusanda kubikwa, Enye yamafemu amakhulu aphezulu e-accounting i-EY isanda kwethula insizakalo yentela ye-crypto yokubala izintela ezibekwe kuma-cryptocurrensets. Ernst & Young umemezele insizakalo entsha ngakho-ke manje Abahwebi sebengasebenzisa i-EY CryptoPrep ukwazi amaphesenti wentela lapho befaka intela kumabhizinisi abo e-crypto. Insizakalo ye-EY yeza ngemuva kwengcindezi eyandayo evela ku-IRS yokuthelisa intengo yenzuzo yokwakha i-crypto yokuhweba futhi amafemu amakhulu aphezulu wokubala imali aqala ukusebenzela insizakalo yawo yehora le-CryptoPrep.
Izihloko ezihlobene:1040AccountingibhangeblockchaincapitalinkantoloAmacala eNkantolocryptoIzindaba ze-CryptoI-Crypto taxAma-cryptocurrenciescryptocurrencyI-Cryptocurrency NewslwemaliUmnothoEditorialukuphoqelelaIzenzakaloukushintshanisaeyzezimaliengenayoI-IRSJULANILatestukudubulaI-MoneroimaliUkuhlukana KwemalinewIzindabaoffshoreONEAbantuImibikoimaliRussiaUkudayiswaImisebenziIntelaIntelaIzintelatopabahwebiUkuhwebaumthetho wokuhambaUKUSvirtualImali ebonakalayowinUmhlaba
Abenzi Bomthetho bakwa-Israyeli Baphakamisa Uguquko Esimweni Sentela Yezomthetho se-Cryptocurrencies